GNU / Linux အံ့ဖွယ်အမှုများ - respin အသစ်ရရှိနိုင်သည်။ Respines သို့မဟုတ် Distros? | Linux မှ
GNU / Linux အံ့ဖွယ်အမှုများ - respin အသစ်ရရှိနိုင်သည်။ Respines သို့မဟုတ် Distros?
မေလရဲ့ပထမဆုံးပို့စ်မှာတော့ငါတို့ပြောမယ် «GNU / Linux အံ့ဖွယ်အမှုများ», un Respin ကို အခြေခံ၍ (တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သောနှင့်စိတ်ကြိုက်လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်) GNU / Linux Distro ခေါ်ဆိုခ «MX Linux »ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖန်တီးခဲ့သည့်။
ပြီးတော့မနေ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး၊ ဗားရှင်း ၂.၃ (2.3DE3) အောက်မှာ ကုဒ်နံပါတ် Ultimateကပြောသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်လေ့လာရန်နှင့်မှတ်ချက်ပေးရန်သင့်လျော်သည် Respin.
MX လျှပ်တစ်ပြက် - ကိုယ်ပိုင်နှင့်တပ်ဆင်နိုင်သော MX Linux Respin ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။
1 Respin ဆိုတာဘာလဲ။
2 MX Linux အကြောင်း
3 အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux - MX Linux ကိုကိုယ်ပိုင် (တရား ၀ င်မဟုတ်သော) ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
3.1 MilagrOS ဆိုတာဘာလဲ
3.2 နောက်ဆုံးပေါ် MilagrOS GNU / Linux ဗားရှင်းတွင်ဘာအသစ်တွေရှိသလဲ။
3.3 Download, Installation, Use နှင့် Screenshots
3.3.1 A.- XFCE Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်
3.3.2 ခ - Plasma Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်
3.3.3 C.- LXQT Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်
3.3.4 D.- IceWM Windows Manager
3.3.5 E.- FluxBox Windows Manager
3.3.6 F.- OpenBox Windows Manager
3.3.7 G.- IceWM Windows Manager
4 Respines သို့မဟုတ် Distros?
သူ့အကြောင်းပြောဖို့အပြည့်အဝမဝင်ခင် Respin « Miracles GNU / Linux »၎င်းသည်၎င်းသည်ထပ်မံရှင်းလင်းရန်အရေးကြီးသည် Respin။ ဤအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါယခင်ထုတ်ဝေမှုကိုထောက်ခံသည်။
"Restpin သည် bootable (live) နှင့် installable ISO image ကိုနားလည်ရန်၊ point point၊ သိုလှောင်မှုအလတ်စားနှင့် / သို့မဟုတ်ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးသော GNU / Linux Distribution ကဲ့သို့သောအခြားအသုံးပြုမှုများအကြားရှိသည်။ ၎င်းကို ISO မှတည်ရှိပြီးသို့မဟုတ်ရှိပြီးသား GNU / Linux Distro ၏ installation တစ်ခုဖြစ်သည်။ MX Linux တွင်မူ MX Snapshot သည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အခြားအဟောင်းကိရိယာများအတွက်ခေတ်မီခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာအစားထိုးခြင်းကဲ့သို့သော «Remastersys y Systemback»သို့သော်၎င်းသည် MX Linux ပေါ်တွင်သာအလုပ်လုပ်သည်။" MX လျှပ်တစ်ပြက် - ကိုယ်ပိုင်နှင့်တပ်ဆင်နိုင်သော MX Linux Respin ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။
MX Linux အကြောင်း
ထိုအမသိသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောသောသူတို့အဘို့ «MX Linux » ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အောက်ပါယခင်ပို့စ်များကိုရှာဖွေစူးစမ်းအကြံပြုပါသည် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဒါကိုသူတို့သိပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အလားအလာကိုမြင်အောင်လုပ်ဖို့ကန့်သတ်မထားဘူး Respines ၏ဖန်တီးမှု:
"MX Linux ဟာမင်းအတွက်ပါna Distro GNU / Linux သည် antiX နှင့် MX Linux အသိုင်းအဝိုင်းများအကြားပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကြော့ရှင်း။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများကိုပေါင်းစပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Operating Systems ၏မိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်ကိရိယာများသည်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။ Live USB နှင့် antiX မှထုတ်ယူလိုက်သောလျှပ်တစ်ပြက်ကိရိယာများသည်အထင်ကြီးလောက်သောသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်မြှင့်စွမ်းရည်များထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ဗီဒီယိုများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အလွန်ဖော်ရွေသောဖိုရမ်များမှတဆင့်များပြားစွာသောအထောက်အပံ့များရှိသည်။".
MX Linux: DistroWatch အဆင့်ကိုအံ့သြစရာများများနှင့်ဆက်လက် ဦး ဆောင်နေသည်
MX Linux - ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများ
အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux - MX Linux ကိုကိုယ်ပိုင် (တရား ၀ င်မဟုတ်သော) ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
El Respin « Miracles GNU / Linux » သူပြောသလို တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ကိုခေါ် "Tic Tac စီမံကိန်း" နောက်တစ်ခု
"MilagrOS GNU / Linux သည် MX-Linux Distro ၏တရား ၀ င်ထုတ်ဝေမှု (Respin) ဖြစ်သည်။ 64-bit ကွန်ပျူတာများ၊ အရင်းအမြစ်နိမ့်ကျခြင်း၊ အဟောင်းနှစ်မျိုးလုံးအပြင်ခေတ်မှီအဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာများအတွက်အထူးကောင်းမွန်ပြီး GNU / Linux နှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ရယူပြီး (ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး) သွင်းပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုအင်တာနက်မလိုအပ်ဘဲထိထိရောက်ရောက်နှင့်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သမျှနှင့်အခြားအရာများကိုကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည်။". အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux (New MinerOS)
နောက်ဆုံးပေါ် MilagrOS GNU / Linux ဗားရှင်းတွင်ဘာအသစ်တွေရှိသလဲ။
ယေဘူယျအားဖြင့် Respin သည်၎င်း၏ဗားရှင်းအားလုံးအတွက်အောက်ပါလက္ခဏာများနှင့်တူညီသောရည်ရွယ်ချက်များရှိသည် -
အထုပ်၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး (firmware, စာကြည့်တိုက်များနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များ) အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အထူးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် hardware driver များ (LAN နှင့် WiFi ကွန်ယက်များ၊ ပရင်တာများနှင့်ဘက်စုံသုံး) နှင့်ရုံးနှင့်နည်းပညာအသုံးပြုမှုအတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ မာလ်တီမီဒီယာနှင့်ဂိမ်းကစားသူများ၊
ကောင်းသော setting များနှင့် optimizationstartup တွင် CPU နှင့် RAM သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း၊ ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာဖွင့်ခြင်းပိတ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
ဆွဲဆောင်စိတ်ကြိုက် ထည့်သွင်းပြီးသားတပ်ဆင်ပြီးသား configure လုပ်ပြီးသားကွဲပြားသော Desktop Environments (DEs) နှင့် Window Managers (WMs) များအကြောင်း။
အဆင်ပြေ loginsအသုံးပြုသူ၏အရသာနှင့်အသုံးပြုသောကွန်ပျူတာ၏လိုအပ်ချက်များအရ၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသော Desktop Environments (DEs) နှင့် Windows Administrators (WMs) များမှတဆင့်။
ဘုံဖြစ်စဉ်များအတွက်အချိန်ကိုချွေတာဥပမာ - ရှည်လျားသောတပ်ဆင်မှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများနှင့် Operating System ၏စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများအပြင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်။
အင်တာနက်လိုအပ်သောကန ဦး အသုံးပြုမှုကိုရှောင်ပါ, ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်တဲ့ GNU / Linux Distro ရှိရန်။
Linux အသုံးပြုမှုကိုညီတူညီမျှလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်တစ်နည်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာများတွင်တူညီသော GNU / Linux Distro တူညီမှုကိုရရှိနိုင်မည်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုရန် Distro နှင့် Rescue and Repair Distro ကဲ့သို့နေရာတိုင်းသယ်ဆောင်သွားနိုင်ခြင်း။ ။
နောက်ဆုံး ဗားရှင်း 2.3 (3DE4) Ultimateတရားဝင်အပေါ်ဖြန့်ချိ 01 / 05 / 2021နှင့်၎င်း၏ယခင်နှင့်ပတ်သက်။ အောက်ပါသတင်းရှိပါတယ် ဗားရှင်း 2.2 (3DE3) အိုမီဂါ:
အစုံလိုက်ပါ ၀ င်သည်: Adobe ad-flashplugin၊ anydesk၊ atmel-firmware၊ blender၊ caliber, clamav၊ codeblocks icon-themes, scratch, thunderbird, uuid-dev နှင့် uuid-runtime, virt-manager, wine, အခြား app များနှင့်စာကြည့်တိုက်များအကြား။
အသစ်သော packages များ, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပါဝင်သည်google-chrome၊ gpodder, intel-gpu-tools, libcurl4-openssl-dev, libgl1-mesa-glx, libqt5websockets5, linux-firmware, multidoge, python-newt:၊ atomicwallet၊ , pywall, မျက်နှာပြင်, simplescreenrecorder, စမတ် -notifier, သစ်ပင်, အမျိုးမျိုး, xorg-server ကို-အရင်းအမြစ်, zenmap ။
နယူး Window Manager ကိုပါဝင်သည်: ယခုတွင် IceWM၊ FluxBox, OpenBox နှင့် I3WM တို့ပါ ၀ င်သည်။ ပြီးတော့ Desktop Environments - XFCE, Plasma နှင့် LXQT ။
သေးငယ်တဲ့က ISO မှာတစ်ခုတည်းတည်းဖြတ်: ဗားရှင်း ၂.၃ (2.3DE3) ယခု Ultimate သည် ၂.၂ ထုတ်ဝေသော ISO ၂.၂ ဖြင့်ထွက်လာသည့်ယခင်ဗားရှင်း ၂.၂ (4DE3.2) နှင့်မတူဘဲ ၃.၂ GB GB (+/- 3.4 GB net) တစ်ခုတည်းဖြင့်ထွက်ပေါ်လာသည်။ ပြည့်သော ခေါ်ဆိုခ +/- 4.4 GB ကိုအိုမီဂါ နှင့် ISO Lite ကို ခေါ်ဆိုခ +/- 2.2 GB ကို Alpha.
Download, Installation, Use နှင့် Screenshots
ဖော်ပြထားသော၎င်း၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဖော်ပြချက်အရ၊
MilagrOS 2.3 နှင့် 2.2 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ GDrive - mega
MilagrOS 2.0 နှင့် 2.1 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ mega
သင်လည်းကြိုးစားနိုင်သည် အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် DistroTest ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ« MilagrOS GNU / Linux » MilagrOS GNU / Linux 2.X ကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင် DistroTest တွင်စမ်းကြည့်ပါ.
၎င်း၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အထွေထွေအသုံးပြုခြင်းသည်မည်သည့်စက်နှင့်မဆိုတူညီသည် «MX Linux »ထို့ကြောင့်မည်သည့်လက်စွဲနှင့်တပ်ဆင်မှုမျိုးကိုမဆိုတွေ့ရပြီးဗီဒီယိုကိုသုံးရန်လုံလောက်လိမ့်မည် GNU / Linux Distro။ အမှန်တကယ်ခြားနားချက်မှာ «MX Linux » နှင့်သာလာသည် XFCE, ဒါမှမဟုတ် Plasma or FluxBoxရှိနေစဉ် "အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux" သင်၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောမဆိုသုံးနိုင်သည် DEs နှင့် WMs.
ထို့ကြောင့်တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် "အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux" ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောမဆိုနှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည် DEs နှင့် WMsအောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း -
A.- XFCE Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်
ခ - Plasma Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်
C.- LXQT Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်
D.- IceWM Windows Manager
E.- FluxBox Windows Manager
F.- OpenBox Windows Manager
G.- IceWM Windows Manager
Respines သို့မဟုတ် Distros?
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊ Respin မင်္ဂလာပါ MX Linux သို့မဟုတ် Antix ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ သူများအဘို့ Linux လောကမှာစတင်ပါ သို့မဟုတ်ရှိသည် တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်အနည်းငယ်သာကျွမ်းကျင်သည် တစ်ဦး GNU / Linux Distro, ကဲ့သို့, MX Linux သို့မဟုတ် Antix တူသောစင်ကြယ်သောသို့မဟုတ်အခြား Distros Debian GNU / Linuxအလွန်ကောင်းသောဖြစ်သော်လည်း၊ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ကြာမြင့်စွာတပ်ဆင်ရန်အချိန်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝတပ်ဆင်ရန်အင်တာနက်လိုအပ်သည်။
Un Respin မှာဖန်တီးခံရနိုင်ဖြစ်ခြင်း၏အားသာချက်ရှိပါတယ် အသုံးပြုသူ၊ ရပ်ရွာအုပ်စုသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလိုအပ်သည်ကွန်ပြူတာတစ်မျိုး (သို့) အမျိုးအစားများစွာတွင်အောင်မြင်စွာတပ်ဆင်ရန်အတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချခြင်း၊ နာရီ / လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်တပ်ဆင်မှုအားလုံးတွင်ညီညွတ်မှုကိုနှစ်သက်သည်။
နေစဉ်၊ က GNU / Linux Distro အဖြစ်စင်ကြယ်သော Debian၊ Ubuntu၊ Mint နှင့်အခြားသူများများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည် Linux လောကရှိပျမ်းမျှအားဖြင့်အဆင့်မြင့်သောအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်သေးငယ်သော ISO တစ်ခုတွင်အနည်းဆုံးလိုအပ်သောအရာများကိုသာဆောင်ကြဉ်းပေးသောကြောင့်သုံးစွဲသူကခိုင်မာသည့်အခြေခံနှင့်အင်တာနက်ကိုလိုအပ်လျှင်လိုအပ်ပါကကွန်ပျူတာနှင့်ဆာဗာအတွက်လိုအပ်သည်များကိုတည်ဆောက်ပေးသည်။
ထိုသို့ "အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux" အဘို့တည်ဆောက်ခဲ့သည် ခေတ်သစ် 64 Bit ပစ္စည်းကိရိယာများ အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်များစွာသောသင်က Respin ကိုလုပ်နိုင်သည် MX Linux သို့မဟုတ် Antix အတွက် 32-bit ကွန်ပျူတာများအဟောင်း အရင်းအမြစ်အနည်းအများ (သို့) လျော့ကျလာခြင်း၊ တုံ့ပြန်မှုများ ကိုခေါ် «Loc-OS ပါ» y သီရိ.
ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သေးငယ်။ အလင်း၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ရည်ရွယ်၍ လောသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်လား။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «MilagrOS» GNU / Linux များအခြေပြုပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောခေတ်မီ Respin (တိုက်ရိုက်နှင့်တပ်ဆင်နိုင်သောနှင့်စိတ်ကြိုက်ရိုက်ချက်) «MX Linux », အရာလည်းအတူပါလာသည် အစွန်းရောက်စိတ်ကြိုက်နှင့် optimizationအရာကစံပြစေသည် "64 bit" ကွန်ပျူတာများ မည်သည့်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ, တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » GNU / Linux အံ့ဖွယ်အမှုများ - respin အသစ်ရရှိနိုင်သည်။ Respines သို့မဟုတ် Distros?
၎င်းသည် debian ထက် ပို၍ ကောင်းသည်ဟုဆိုလိုလျှင်၎င်းသည်ဝါသနာပါပြီး Linux အကြောင်းအနည်းငယ်သာသိရှိရန်ဖြစ်သည်။ Mxlinux သည်မဆိုးသော distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လအနည်းငယ်တပ်ဆင်ပြီး၎င်းကိုဖြုတ်ပစ်ရန်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အရောင်တင်ရန်များစွာကျန်ရှိနေသေးသော distro တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အဆုံး၌သင့်ဘောလုံးများကိုထိတွေ့ခြင်းကြောင့်မအောင်မြင် ဥပမာအားဖြင့် usb သည်အမြဲတမ်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးညတွင်းချင်း ၄ င်းတို့ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ အမြဲတမ်းကောင်းစွာကောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်ခဲ့သည်။ အခြား pc တစ်ခုမှာငါ debian စမ်းသပ်မှုကို ၃ နှစ်ကြာလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ သုံးနှစ်အတွင်းငါပြproblemနာတစ်ခုတည်းမရှိသေးဘူး။ အဲဒါကစမ်းသပ်ဖို့အတွက်လို့ထင်ရတဲ့ debian testing ဖြစ်ပြီး bua ဟာမတည်ငြိမ်သေးဘူး။ နောက်ထပ်အဖြစ်မှန်မှကြည့်လျှင်စင်ကြယ်သောအဝိဇ္ဇာ၊ ကျွန်ုပ်သည် debian စမ်းသပ်ခြင်းထက်ကျွန်ုပ်သည်တည်ငြိမ်သော debian နှင့်ပြmoreနာများပိုများသည်။ အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး debian စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူသုံးစွဲခဲ့ကြသူများ၊ အခု xubuntu က mxlinux နဲ့ Linux mint ထက်ပိုကောင်းတယ်၊ mxlinux ငါက xubuntu နဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီမှာသင်ဒီမှာတွေ့ရတာကဗုံးတစ်လုံးဟာအလုံးပေါင်းထောင်သောင်းချီနဲ့ကုန်နေတဲ့အချိန်၊ မင်းရဲ့ဘဝကအသုံးမ ၀ င်တဲ့အရာတွေကိုအများကြီးဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကအဲဒါကိုပိုမိုမြန်ဆန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်၊ အဲဒါကိုပိတ်လိုက်ပါ၊
မင်္ဂလာ, Antidistro ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျားပြောတာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့၊ ဒီစကားစုကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြုပြင်လိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Respin ဟာ GNU Distro / Linux ရဲ့ installation, configure and optimization လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတနည်းပါးသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်သူသို့မဟုတ် ၀ င်းဒိုးမဟုတ်သူတစ် ဦး ကဲ့သို့၊ Debian, Ubuntu, Mint နှင့်အခြားသောသူများကဲ့သို့သောစင်ကြယ်သော GNU / Linux Distro သည် Linux World ရှိသာမန်သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများအတွက်အများအားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသော (သို့) စံပြဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံးလိုအပ်သောအရာများကိုသာယူဆောင်လာသည်။ သုံးစွဲသူသည်ခိုင်မာသောအခြေခံနှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်လိုအပ်ပါကကွန်ပျူတာနှင့်ဆာဗာအတွက်လိုအပ်သမျှကိုတည်ဆောက်ပေးသော ISO သေးငယ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်တိကျသော distro တစ်ခုပေါ်တွင်သာအလုပ်လုပ်ပါက၊
Diego မှနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သေချာတာပေါ့ MX Snapshot tool ဟာတခြား GNU / Linux Distros အတွက်တစ်လောကလုံးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သို့သော်၊ ထိရောက်သော (သို့) အသုံးပြုရန်မလွယ်ကူသော်လည်း Linux Respin (ဥပမာ) နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။https://linuxrespin.org/) နှင့် RemasterSys ။ Ubuntu ၁၈.၀၄ တွင်၎င်းသည်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့ပြီးအလွန်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့သူများအတွက် LFS (Linux From Scratch) ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင် Distro ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိလျှင် GNU / Linux Distro တစ်ခုစီသည် Respines ပြုလုပ်ရန်ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာကိုထုတ်လွှတ်လိမ့်မည်။
Hummm၊ Mint 20 linux နဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှာပါ။ တကယ်လို့များ Linux ကိုကောင်းကောင်းစသုံးသူတွေအတွက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် Linux မှာစတင်အလုပ်လုပ်သူတွေအတွက်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ချစ်ကြလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့်အရာအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ Zorin ဖြစ်သည်။ လေးစားပါတယ်
Octavio နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မည်သည့် GNU / Linux Distro မှမဆိုလူ၊ အုပ်စု၊ အသိုင်းအ ၀ ိုင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော respin ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ဤလောကတွင်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linux စသောသူများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ Zorin နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းပြီးလှပတဲ့ distro တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
ငါ Milagros GNU / Linux ကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါမှာ MX-LINUX motherboard, Flatpak လိုပြproblemနာရှိတယ်။ Plpak မှတစ်ဆင့်မည်သည့် package ကိုမဆိုသင်တပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားလျှင်ထာဝရတစ်ခုနှင့်နှစ်ခုကြာသည်။ ၎င်းသည် Thunar ကိုဖွင့်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ PC ကိုခေတ္တပိတ်ဆို့လိုက်သည်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်, Aranqoti ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ MX Linux နှင့် MilagrOS သုံးနှစ်ကျော်ကြာကတည်းကအခြား Distros များတွင် flatpak ကိုမစမ်းသပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် Flatpak package ဘယ်လောက်ကြာကြာ install လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာကြာမသိရဘဲအချိန်အတော်အတန်ကြာတဲ့ MX Linux / MilagrOS ပေါ်မှာငါခံစားရတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ပျံသန်းသည်၊ ပြflyနာရှိရာကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာမသိပါ။ သို့သော်ဖိုရမ်များတွင် MX-LINUX နှင့် MilagrOS တို့နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖြေရှင်းချက်များကိုမတွေ့ရ၊ နေ့တိုင်းပိုမိုပျံ့နှံ့နေပြီးသင်သည်များစွာသော application များ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများကိုသင်ခွင့်ပြုသည်
သေချာပါတယ်။ ထိုအဟုတ်, Flatpak Snap နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အများကြီးကတိပေးထားတယ်။ AppImage သည်မိမိကိုယ်ကိုနေရာချရန်တိုက်ပွဲဝင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်မှာဒီ Respin ဟာ 1GB ram ပါတဲ့အတော်လေးအရင်းအမြစ်ရှိတဲ့ AMD E2500-4 လက်ပ်တော့ပ်ပေါ်မှာ install လုပ်ထားပါတယ်။ အမှန်တရားကအသင်းဟာအရမ်းကိုသွက်လက်နေပါတယ်။ ဒီကွန်ပျူတာမှာငါအရင်က MD-Linux ကို KDE (အရင်တုန်းက MilagrOS မှာသုံးခဲ့တဲ့ desktop) ကိုသုံးပြီး install လုပ်ပြီးကွန်ပြူတာရဲ့အမြန်နှုန်းကအရမ်းဆိုးဝါးလာတယ်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Debian နှင့် KDE ကိုထိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ယခု MilagrOS နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုကိုအောင်မြင်နိုင်မည်လားမသိပါ။ သင်ဤ Respin တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်“ Startup တွင် CPU နှင့် RAM သုံးစွဲမှုနိမ့်ခြင်း၊ ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက်” သေးသောလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်သင်ခန်းစာအနည်းငယ်ကို“ ကောင်းမွန်သောဖွဲ့စည်းမှုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်” ပြုလုပ်နိုင်မလား၊ ကျွန်ုပ်မသိပါ။ သူတို့သည်အမှန်တကယ်သိသာသောကြောင့်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သူတို့သတိထားမိနိုင်သည်။
Kirulo! မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Debagphan နှင့် Localepurge အပြင် MilagrOS တွင်ပြုလုပ်ထားသောများစွာသော optimization များအနက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Preload နှင့် Prelink ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်တော့ app တွေ၊ စာကြည့်တိုက်တွေနဲ့ add-ons တွေအများကြီးကို install လုပ်ထားတယ်။ လိုအပ်တဲ့အခါမှသာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ memory ထဲမှာ load လုပ်မယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ XFCE နဲ့ Stacer အက်ပ်ရဲ့ "Session and Start" option ကိုအသုံးပြုပြီး startup မှာမလိုအပ်တဲ့အရာကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်။ MilagrOS သည် AHS ဗားရှင်း MX Linux ကိုအသုံးပြုသော်လည်းအရင်းအမြစ်နိမ့်ကျသောကွန်ပျူတာများနှင့်ပိုမိုလိုက်ဖက်ညီစေရန်အတွက်အဟောင်းကို kernel ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည့်ရှုရန်ဒီပို့စ်ကိုအရင်လေ့လာရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ https://blog.desdelinux.net/como-optimizar-gnu-linux/
GNOME CIRCLE - GNOME အတွက်လျှောက်လွှာများနှင့်စာကြည့်တိုက်များစီမံကိန်း